Eoropa Andrefana · Jolay, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Andrefana · Jolay, 2010
Tantara mikasika ny Eoropa Andrefana tamin'ny Jolay, 2010
Gresy 28 Jolay 2010
Italia: Loza hamatotra ireo mpitoraka blaogy?
Italia 27 Jolay 2010
Iray amin'ireo fepetra ao amin'ny Lalàna mifehy ny Media sy ny Fihainoan-dresaka resahana tato ho ato ao anivon'ny Parlemanta Italiana ny hoe “ireo rehetra tompon'andraikitra amina tranonkalam-baovao” dia tsy maintsy mamoaka ao anatin'ny 48 ora ny fanitsiana takian'ireo fitarainana
Frantsa : Sahotaka tao amin'ny vondromp-piarahamonina mpifindrafindra taorian'ireo onja-na herisetra niharo tifitra
Frantsa 26 Jolay 2010
Tamin'ny 18 Jolay, 22 taona taorian'ny namonoana nahafaty an'i Luigi Duquenet; nanetsika ny filaminan'ny tanàna Saint Agnana ireo rotaka tany amin'ny lemak'i Loire ary namelona avy hatrany indray ny baiko aman-dalàn'ireo hetsika raha mbola nanazava ireo fomba amam-panao manavakavaka atao amin'ny vahoaka Roma .
Sina : Hividy ny petra-bolan'ny BP ? Azony atao
Amerika Avaratra 20 Jolay 2010
Any Beijing androany ny sekretera vahiny Britanika William Hague, ary mitatitra ireo haino aman-jery Sinoa amin'ny aterineto fa hivarotra ireo fananan'i BP amin'ni Sina no tanjon'ny diany avy amin'ireo fitantanana Amerikana latina. Ratsy ireo fanakianana amin'ireo tolo-kevitr'ireo mponina amin'ny aterineto mba hanampiana ny fifanarahana amin'ireo resaka amin'ny fifanakalozana.
Finlandy 15 Jolay 2010
Ankapobe: Mitady lalao hafa ilay orita alemana Paul
Emirà Arabo Mitambatra 08 Jolay 2010
Eto ilay orita Paul dia naminany ny fandresen'i Alemaina tamin'ny lalao teo aloha nanoloana an'i Arzantina. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay, ka ao anatin'izao mondial mampirediredy izao, dia misy orita alemana tanora antsoina hoe Paul izay mitoetra ao anaty dobo fitaratra ao amin'ny SeaLife any Oberhausen, Alemaina nahamarina hatrany ny faminaniany...
Manambara ny fanohanana avy amin'ny Omidyar Network ny Global Voices
Amerika Avaratra 05 Jolay 2010
Amin-kafaliana no ilazako fa nanao fampiasam-bola mahatratra 1,2 tapitrisa dôlara amin'ny asan'ny Global Voices ny Omidyar Network. Fifandaminana mpanao asam-panasoavana ny mpiara-belona, natsangan'ny mpanorina ny eBay antsoina hoe Pierre Omidyar sy ny vady andefimandriny Pam, ho entiny manatsara ny fiainan'ny olona amin'ny alalan'ny “fitrandrahana ny herin'ny tsenambarotra”ny Omidyar. Efa nanohana...
Afovoany Atsinanana: Veloma mandrakizay ry Saramago
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 01 Jolay 2010
Misaona sy mitomany ny fahafatesan'ilay mpanoratra Portiogey Jose Saramago ireo mpitoraka blaogy any Moyen-Orient. Apariak'i Tarek Amr ny fihetseham-pon'izy ireny.